Caafimaadka Habdhaqanka - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Kooxdayada udiyaar garowga ah ee khubarada caafimaadka dhimirka ayaa halkan u jooga inay ku bixiyaan adeegyada latalinta caafimaadka maskaxda meel qarsoodi ah Waxaan bixinaa ballamo shaqsiyeed, qoys, iyo la-talin kooxeed da 'kasta leh. Kooxdayada caafimaadka habdhaqanka waxay si dhow ulashaqeeyaan kooxdayada caafimaadka si loo hubiyo in bukaan kastaa helo labadaba taageerada caafimaadka maskaxda iyo daryeelka jireed ee loogu baahan yahay fayoobaanta dhameystiran.
Tusaalooyinka adeegyada caafimaadka dhimirka ee bixiyeyaasheena ay ka caawiyaan bukaanada waxaa ka mid ah niyad jab, walaac, maareynta culeyska, laba-cirifoodka, u gudbinta ilaha bulshada, dhacdooyinka isbadalaya nolosha, murugada, luminta, la qabsiga, xalinta dhibaatada, maareynta daawooyinka, la talinta xadgudubka maandooriyaha iyo daryeelka dhaawacyada ku wargeliyay .
Bukaanku way soo wici karaan oo ballan ayey u qaban karaan si toos ah ama waxaa u gudbin kara bixiyaha Adeegga Caafimaadka Bulshada. Waxaan hadda bixinnaa habboonaanta telehealth. Xitaa uma baahnid inaad gurigaaga uga tagto adeeggan!
Bixiyeyaasha Caafimaadka Habdhaqanka